Android အတွက် AirTags အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာ ၈ ခု Androidsis
Android အတွက် AirTags အတွက်ထိပ်ဆုံး 8 အစားထိုး
Ignacio Sala | 15/07/2021 22:00 | အခြားကိရိယာများ
တည်နေရာစနစ်များသည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ၊ အမှန်တကယ်တွင်၎င်းတို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာစျေးကွက်ထဲတွင်ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည် SIM ကဒ်နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသောကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောလည်ပတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ မော်တော်ယာဉ်စင်းများထိန်းချုပ်မှု။
သို့ရာတွင်၊ အိမ်၌ဖြစ်စေမည်သည့်အရာဝတ္ထုကိုမဆိုရှာဖွေရန်ခွင့်ပြုသည့်နေရာဖြစ်သည့် AirTags စတင်ခြင်းနှင့်အတူ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်နှင့်ဝေးရာနေရာမှပျောက်ဆုံးသွားပါက Apple သည်ဘီးကိုအသစ်ထပ်မံအသစ်တီထွင်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ တကယ်တော့ AirTags သူတို့ကစျေးကွက်ဝင်တိုက်နောက်ဆုံးဖြစ်ကြသည်။
AirTags ကိုတရားဝင်တင်ဆက်မှုမတိုင်မီလအနည်းငယ်က Samsung သည် Galaxy SmartTags ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ထိုမတိုင်မီနှစ်များစွာအကြာတွင် Tile ကုမ္ပဏီသည်ဤစက်ကိရိယာ၏အမှန်တကယ်တော်လှန်ရေးဖြစ်သည့်တည်နေရာပြမီးများကိုစတင်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူတို့သည်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။ သင်အကောင်းဆုံးကိုသိလိုလျှင် Apple AirTags အစားထိုး Android မှာအလုပ်လုပ်တဲ့၊ ဆက်ဖတ်ရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
1.1 tile စတစ်ကာများ
1.2 tile Pro ကို
2 Samsung Galaxy SmartTags များ
4 Cube Pro ကို
5 Filo တံဆိပ်
ငါတို့ Tile အကြောင်းပြောရင်ငါတို့ပြောရမယ် ပထမဆုံးတည်နေရာ beacons ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဤတည်နေရာ beacons များသည်ကျွန်ုပ်တို့မြင်ကွင်းမှပျောက်ကွယ်သွားသောအရာများ၊ ကျွန်ုပ်တို့မှပျောက်ဆုံးသွားခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှခိုးယူသွားသည့်အရာများအားရှာဖွေရန်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ယက်အသုံးပြုသူများကိုအသုံးပြုသည်။
Android application ကတဆင့်ဖုန်းကိုမြည်အောင်လုပ်နိုင်တယ် ဝေးလျှင်၎င်းကိုမြေပုံပေါ်တွင်ရှာပါ၎င်းတို့အားလုံးသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးစာရင်းသွင်းခပေးရန်မလိုဘဲအခမဲ့ဖြစ်သည်။
ရေးသားသူ: ကြွေပြား Inc
ကြွေပြားကျွန်တော်တို့ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာထည့်လေ့မရှိ4ကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသေးစိတ်ပုံစံများ၊
Tile Stikcer သည်အသွင်အပြင်တစ်ခုနှင့်အတူပြောင်းပြန်ဖြစ်သည် မည်သည့်စက်ပစ္စည်းကိုမဆို beacon ကို fix ရန်ခွင့်ပြုသောကော် မြင်ကွင်းပျောက်သွားသည့်အခါကိရိယာကိုရှာရန်အက်ပ်ကိုသုံးပါ။ သင်ဆိုဖာခေါင်းအုံးများ၊ ကင်မရာ၊ အိမ်သော့များ၊ တက်ဘလက်များမှတဆင့်သင်သွားသောအခါတီဗွီအတွက်အဝေးထိန်းခလုတ်ကိုရှာဖွေရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဒါဟာရှိပါတယ် 36mm လက်လှမ်းမီ ဘက်ထရီသည် ၂ နှစ်ကြာမြင့်သည်။ ရေစိုခံသည်။ အနက်ရောင်ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ ယူနစ် ၃၉.၉၉ ဖြင့် ၂ ယူနစ်၊ ၆၄.၉၉ ယူရို ၄ ယူနစ်ဖြင့်ဝယ်သည်။ ၎င်းသည်အရွယ်အစား ၂၇ မီလီမီတာ x ၇.၃ မီလီမီတာရှိပြီးဆုံးရှုံးသွားသောအရာဝတ္ထုများကိုရှာဖွေရာတွင်ကူညီမည့်အသံထုတ်လွှင့်မည့်စပီကာသေးသေးလေးတစ်ခုရှိသည်။
tile Pro ကို
tile Pro ကို တစ်ထစ်ထည့်သွင်း ၎င်းကိုသော့၊ ကျောပိုးအိတ်နှင့်အခြားအရာဝတ္ထုများဖြင့်အလွယ်တကူသယ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဤသည်သည်တက်နှင့်အတူသာ။ ကြီးမြတ်ဘလူးတုသ်အကွာအဝေးရှိကြောင်းမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ် ၅ မီတာ။
၎င်းတွင် Tiles မှပေးသောအခြားမော်ဒယ်များထက်ပိုမိုမြင့်မားသော dB ကိုထုတ်လွှတ်သည့်စပီကာပါ ၀ င်သည်။ အစားထိုးဘက်ထရီသည်တစ်နှစ်ကြာသည်၊ ရေစိုခံ (ရေစိုခံနိုင်ခြင်းမရှိ) နှင့်အရွယ်အစားမှာ 1x42x42mm ရှိသည်။ ဒီပုံစံကိုအရောင်ရရှိနိုင်တယ် အနက်၊ အဖြူ၊ ပန်းရောင်၊ အပြာနှင့်အနီရောင်။
စျေးနှုန်း 1 Tile Pro သည်ယူရို ၃၄.၉၉ ဖြစ်ပါသည်,2Tile Pro ကို ၅၉.၉၉ ယူရိုဖြစ်ပြီး ၄ ခုမှာ ၉၉.၉၉ အထိရနိုင်သည်။
Tile Slim ကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် ကျဉ်းသောနေရာများတွင်အသုံးပြုပါ, ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ, Hatch ပေါ်တွင်, ခရီးဆောင်အိတ်များနှင့်တူသော။ အရောင်ရရှိနိုင်တယ် အနက်ရောင်၊ ပန်းရောင်၊ အနက်ရောင်နှင့်အနီ, 61 မီတာအကွာအဝေးရှိပါတယ်။
၎င်းတွင်အသံထုတ်လွှတ်သည့်စပီကာတစ်ခုပါရှိသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်စပ်သောအရာဝတ္ထု (များသောအားဖြင့်ပိုက်ဆံအိတ်သို့မဟုတ်အိတ်) ကိုရှာဖွေရန်ခွင့်ပြုသည်။ အစားထိုးမဟုတ်သောဘက်ထရီသည် (၃) နှစ်ကြာသည်၎င်းသည်ရေစိုခံနိုင်ပြီးအရွယ်အစားမှာ 86x54x2,4 mm ရှိသည်။
စျေးနှုန်းက 29,99 ယူရို တစ်ယူနစ်အတွက်ယူနစ် ၂ ခုသည်ယူရို ၅၉.၉၈ ဖြစ်သည်။
Tile Mate ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဒီဇိုင်းတစ်ခုပေးသည် Tile Pro နှင့်အလွန်ဆင်တူသည် ကျွန်တော်တို့အမြဲထိန်းချုပ်ချင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့အပေါက်တစ်ခုပါရှိသော်လည်း၊ Bluetooth အကွာအဝေးထက်ဝက် - ၆၁ မီတာရှိသည်။
၎င်းတွင်ပါဝင်သောအရာဝတ္ထုကိုရှာဖွေရန်ခွင့်ပြုသည့်အသံထုတ်ပေးသောစပီကာတစ်ခုပါရှိသည် ဘက်ထရီအစားထိုးဖြစ်ပါတယ် ၎င်းသည် ၁ နှစ်ကြာရေစိုခံပြီးအရွယ်အစား ၃၅x၃၅ x ၆.၂ မီလီမီတာရှိသည်။
အဆိုပါကြွေပြား Mate မှာစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ် 24,99 ယူရို။ နှစ်လုံးစီပါက ၄၇.၉၉ ယူရိုနှင့် ၄ ယူနစ်မှာ ၆၉.၉၉ ယူရိုရှိသည်။ ၎င်းကိုအဖြူရောင်ဖြင့်သာရရှိနိုင်သည်။
Tile Beacons များအတွက်ဖော်ပြသည့်စျေးနှုန်းအားလုံးသည်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ လိုချင်ရင် ကျွန်တော်တို့ကိုအနည်းငယ်ယူရိုကယ်တင်ပါအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တာကသူတို့ကို Amazon ကနေတစ်ဆင့်တိုက်ရိုက်ဝယ်တာပါ ဒီ link ကို.
Samsung Galaxy SmartTags များ
Galaxy SmartTag သည်အရာဝတ္ထုကိုခြေရာခံအဖြစ်လုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင် AirTag နှင့်စွယ်စုံသုံးနိုင်သောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခလုတ်တစ်ခုထည့်သွင်း အခြားမည်သည့်သဟဇာတဖြစ်သောစမတ်အိမ်သုံးကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ ကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုဖွင့်ခြင်း၊ အိမ်ရှိမီးများအားလုံးကိုပိတ်ခြင်း၊ အချက်ပေးမှုကိုဖွင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ခြင်းစသည့်လုပ်ရပ်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ဒီဇိုင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ဒီ၏ရန်အလွန်ဆင်တူသည် တည်နေရာ beacons ၏ကျန် အဲဒါကိုစျေးကွက်ထဲမှာတွေ့နိုင်တယ်၊ အပေါ်ပိုင်းကအပေါက်တစ်ပေါက်ရှိတယ်။ အရွယ်အစားနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၎င်းသည်ကျန်စျေးကွက်ရှိအခြားသောဖြေရှင်းချက်များ (39x10x19 mm) နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ Galaxy SmartTags များကိုဗားရှင်းနှစ်မျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
SmartTag standard သည် Bluetooth 5.0 စွမ်းအင်နိမ့် (LE) ကိုအသုံးပြုသည်။
SmartTag + အရာဝတ္ထုများကိုခြေရာခံရန် Ultra-wide band (UWD) ၏အားသာချက်ကိုယူပါ။
စစ်ဆင်ရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌, နှစ် ဦး စလုံးတူညီလမ်းအတွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ Samsung ၏တည်နေရာပြ beacons အများဆုံးအကွာအဝေးသည် 120 မီတာTile Pro လိုပဲ Apple AirTags ထက်မီတာ ၂၀ ပိုတယ်။
၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာဝတ္ထုကိုရှာရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် Galaxy Find ဖြစ်သော network ကိုအသုံးပြုရမည် Beacon ၏တည်နေရာကိုရှာဖွေရန် Samsung စမတ်ဖုန်းအားလုံးကိုအသုံးပြုပါ ၎င်းကိုအနီးအနားတွင်ဖြတ်သန်းသွားသောသုံးစွဲသူများမပါဘဲကျွန်ုပ်တို့ဆုံးရှုံးသွားသည်၊ မည်သည့်အကြောင်းကြားစာကိုမဆိုလက်ခံရရှိသည် (Apple ၏ AirTag ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်မှု)
တစ်ခုတည်းသောတစ်ခုက Galaxy SmartTag မှာတွေ့ရတာကတော့ AirTags တွေနဲ့အတူတူပါပဲ။ သူတို့ဟာဂေဟစနစ်အတွင်းမှာသာသဟဇာတဖြစ်သည်။ ဒါက သင့်မှာ Samsung စမတ်ဖုန်းမရှိရင်, အခြားရွေးချယ်စရာစဉ်းစားလို့မရပါဘူး။
Samsung Galaxy SmartTag ၏စျေးနှုန်းမှာခန့်မှန်းခြေဖြစ်သည် 29,99 ယူရိုAmazon ကို ၀ ယ်ရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အထူးလျှော့စျေးတွေရနိုင်ပေမဲ့၊ una o ပိုပြီးယူနစ်။ ၎င်းကိုအဖြူနှင့်အဝါရောင်ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
ယခုအချိန်တွင်ဤ locator beacons များကိုသင်မကြိုက်ပါကအရောင်ရင့်မှုရှိပါက Chipolo သည်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သော Chipolo ONE နှင့်ရွေးချယ်ရန်စဉ်းစားသင့်သည်။ အဆိုပါ Chipolo ONE တစ် ဦး ရှိပါတယ် တ ဦး တည်းအပေါက်နှင့်အတူပတ်ပတ်လည်ဒီဇိုင်း သော့၊ အိတ်၊ ကျောပိုးအိတ်တွေမှာချိတ်ဆွဲထားတယ်။
ဤအချက်ပြမီး၏နောက်ထပ်အရေးကြီးသောအချက်မှာစွမ်းရည်ဖြစ်သည် 120 db ၏အသံထုတ်လွှတ်ပေးပါ ပျောက်ဆုံးသွားသော (သို့) နေရာလွဲနေသည့်အရာဝတ္ထုများကိုသင်ရှာဖွေသောအခါ၎င်းသည်အလွန်အသုံးဝင်လိမ့်မည်။ ပါဝင်သည် ဘက်ထရီ အစားထိုး ၎င်းသည်နှစ်နှစ်ကြာမြင့်ပြီး splash tahan (IPX5) ဖြစ်သော်လည်းရေငုပ်ခြင်းမရှိပါ။
Es အမေဇုံ Alexa နှင့် Google Assistant နှင့်လိုက်ဖက်သည်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏တည်နေရာကိုအသံ command များ သုံး၍ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမိုဘိုင်းပေါ်ရှိသတိပေးချက်များကို configure လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်၊ သို့မှသာသူနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာဝတ္ထုကိုမစွန့်ခွာနိုင်တော့ပါ။ ဤအချက်၌ကျွန်ုပ်တို့ပြောသောကျန် beacons များ၌လည်းရနိုင်သမျှသော clueless များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါး
Chipolo တည်နေရာ beacons အဘို့အအမေဇုံပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည် 24,90 ယူရိုs အဝါရောင်၊ အဖြူ၊ အပြာ၊ အနက်ရောင်၊ အနီရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်ရှိပြီး 38x38x7 mm ရှိသည်။
Cube Pro ကို
Samsung SmartTags ကဲ့သို့ပင် Cube Pro တွင်ကိရိယာတွင်ခလုတ်တစ်ခုပါဝင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုသာအသုံးပြုခွင့်ပေးသည် ကင်မရာအဝေးထိန်းအဖြစ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမတ်ဖုန်း၏။ သူ့မှာ 101 dB အသံထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်တဲ့စပီကာတစ်ခုရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုရှာဖို့မလွယ်ကူတော့ဘူး။
အစားထိုးဘက်ထရီသည်တစ်နှစ်ကြာသည် ရေစိုခံ IP67။ ကျွန်ုပ်တို့ beacon နှင့်ဆက်စပ်သည့်ကိရိယာမှကျွန်ုပ်တို့ရွေ့လျားသွားသောအခါ application သည်ကျွန်ုပ်တို့ mode ထဲသို့ဝင်ကြောင်းသတိပေးရန်နှိုးစက်တစ်ခုထုတ်လိမ့်မည်။ ချစ်သူ.
ဤရွေ့ကားတည်နေရာ beacons ၏အနုတ်လက္ခဏာအချက်ဖြစ်ပါသည် ၎င်းသည် Bluetooth မှတဆင့်မီတာ ၆၀ သာအကွာအဝေးရှိသည်ဤစာရင်းရှိရွေးချယ်စရာအများစုသည်ထိုအကွာအဝေးထက်ကျော်လွန်သောအခါ။ Cubre Pro Beacons များကိုဒေါ်လာ ၂၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချပြီးလက်ရှိစပိန်နိုင်ငံတွင်မရရှိသေးပါ။
ရေးသားသူ: Cube Tracker LLC မှ
Filo Tag Beacon များသည်ပုံမှန်အားဖြင့် rounded design မှထွက်ခွာကာကျွန်ုပ်တို့အားa21x41x5 စင်တီမီတာအရွယ်အစားနှင့်အတူစတုဂံဒီဇိုင်း, အကွာအဝေးမီတာ 80 ရှိသည်နှင့်ဘက်ထရီအစားထိုး, ကျွန်တော်တို့ကို 12 လကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။
ထိပ်မှာကဖဲကြိုးတစ်မျိုးမျိုးကိုထည့်သွင်း ကျွန်ုပ်တို့ကိုသော့ခတ်၊ ကျောပိုးအိတ်၊ အိတ်ပေါ်တွင် beacon ထားရန်ခွင့်ပြုသည်ကိရိယာနှင့်ဝေးသွားသောအခါ ... သတိပေးသည်
၎င်းတွင်ခလုတ်တစ်ခုပါရှိသည်။ ၎င်းကိုနှစ်ကြိမ်နှိပ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ပေါ်တွင်စက်အသံတိတ်နေလျှင်ပင်ပြန်လည်ဖွင့်သည်။ သော့နှင့်ဖုန်းနှစ်မျိုးလုံးကိုအလွယ်တကူမမှတ်မိ၊ အလွယ်တကူပျောက်ဆုံးသောသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Filo Tag ၏ locacacion beacon ကိုအနီ၊ အပြာ၊ အပြာနှင့်အဖြူနှင့်ရရှိနိုင်သည်။ ဈေးနှုန်းမှာယူနစ်တစ်ခုလျှင်ဖြစ်သည် 29,90 ယူရို။ ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြသောထုတ်ကုန်အားလုံးနှင့်မတူဘဲ Filo Tags ကိုအီတလီနိုင်ငံတွင်ထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ်သည်။
Filo Tag ကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုအသုံးချရန် မည်သည့်စာရင်းပေးသွင်းမှုအမျိုးအစားအတွက်မဆိုငွေပေးရန်မလိုပါ အောက်ပါလင့်ခ်မှတဆင့်အခမဲ့လျှောက်ထားနိုင်သည်။
ရေးသားသူ: Filo srl
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » အခြားကိရိယာများ » Android အတွက် AirTags အတွက်ထိပ်ဆုံး 8 အစားထိုး
Android အတွက်အကောင်းဆုံးဒိုင်ယာရီ (၅) ခု